बिद्यार्थी भिषामा जापान जान चाहाने सबैले निशुल्क भाषा पढन पाउनु पर्छ । : प्रवन्धक सावित्री लम्साल - हेल्लो चितवन अन्लाईन्
February 14, 2021 मा प्रकाशित (२ हफ्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ९ मिनेट
सावित्री लम्साल चितवनको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम नै हो । नेपालमा मास्टर सम्मको अध्यान पुरागर्नु भयको छ भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा टिआई (TITI) ट्रेनिङ्ग गरेर परामर्श क्षेत्रमा आफुलाई टिआई (TITI) सटिफाई ट्रेनर को रुपमा स्थापित गराउन सफल यासाशि जापानीज भाषा स्कूल का प्रवन्धक बिगत दश वर्ष देखि आफु यो क्षेत्रमा रहेर सयौ बिद्यार्थी हरुलाई सहि मार्ग दर्शन गराउदै आउनुभयको छ ।
यासाशिको अर्थ जापानिज भाषामा सजिलो हुन्छ । र अहिले हामी बजारमा नामपनि यासाशि काम पनि यासाशि भन्ने शब्द बाट परिचित छौ । चितवन बाट जापानिज भाषा पढेर बिद्यार्थी भिसामा जापान जान चाहने सबैले निशुल्क जापानिज भाषा पढेर जान पाऊनुपर्छ। भन्ने उद्देश्य साथ यासाशि जापानीज भाषा स्कूल लागिपरेको छ र मलाई आशा छ यो एकदिन अबस्य सफल हुनेछ। तर अहिले बजारमा हुदै नभयको जापानिज द्वारा जापानिज भाषा पढाईन्छ भनेर घरका भित्ता बाटोघाटोमा प्रचार सामाग्री राखेर झुटको खेति गरेर सोझासाजा बिद्यार्थी सग भाषा पढाउने बहानामा पैसा असुल्दा पनि प्रशासन मौन बस्नु अलि आफ्नो मन् दुखाई भयको बताउनुहुन्छ ।
यहि बिषय मा रहेर सावित्री लम्साल व्यवसायिक वार्ता गरेको छ । प्रस्तुत छ वार्ताको सम्पादित अंश :
प्रश्न : शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरु को भीडमा यासाशि जापानीज भाषा स्कूल नै किन रोज्ने ?
यासाशि जापानीज भाषा स्कूल को नाम बाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि जापानमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको लागि परामर्श दिने शैक्षिक परामर्श दात्री सस्था हो। यासाशि जापानीज भाषा स्कूल भनेको जापानिज भाषा प्रशिक्षक द्वारा संचालित चितवनको एक मात्र जापानीज भाषा स्कूल हो। यसका साथ साथै चितवन बाट जापानिज भाषा पढेर बिद्यार्थी भिसामा जापान जान चाहने सबैले निशुल्क जापानिज भाषा पढेर जान पाऊनुपर्छ। भन्ने उद्देश्य साथ लागिपरेको चितवन को एक मात्र सस्था यासाशि जापानीज भाषा स्कूल हो। यो बाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि यासाशि जापानीज भाषा स्कूल ले बिद्यार्थी सग भाषा पढाउने बहानामा पैसा असुल्दैन।
यासाशि जापानीज भाषा स्कूलको जापानको विभिन्न शहरमा रहेका स्कुल तथा कलेज सँगको राम्रो सहकार्यले गर्दा पनि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले उच्च शिक्षाको क्रममा कुनै कठिनाई भोग्नु परेको छैन । हरेक वर्ष जापानका विभिन्न स्कुल तथा कलेजहरुको आमन्त्रणमा म जापान पुग्नुको साथ साथै यासाशि जापानीज भाषा स्कूलको प्रतिनिधि बाट आफैले भिजिट गरेका स्कुल तथा कलेज हरुमा अप्लाई गरिनुको साथ साथै भाषा सिक्दादेखि जापान पुगेर काम गर्दा कलेज तथा विश्वविद्यालय परिबर्तन गर्दा पढाई सकाय पश्चात आफ्नो योग्यता अनुसारको काम परिबर्तन सम्म आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिने भएकोले पनि हाम्रो यासाशि जापानीज भाषा स्कूल सधै राम्रो काम गरिरहेको मलाई अनुभूति हुन्छ । यसका साथै हामीले एक दशकको अवधिमा आर्जन गरेको विद्यार्थी तथा अभिभावकको विश्वास र मायाले गर्दा पनि हामी सबैको रोजाइमा परेका छौं ।
प्रश्न : तपाई त हामीले मात्र निशुल्क जापानिज भाषा पढाउछौ जस्तो कुरा गर्नु भयोत ?
मैले पहिलानै भनिसके चितवन बाट जापानिज भाषा पढेर बिद्यार्थी भिसामा जापान जान चाहने सबैले निशुल्क जापानिज भाषा पढेर जान पाऊनुपर्छ। भन्ने उद्देश्य साथ यासाशि जापानीज भाषा स्कूल लागिपरेको छ र मलाई आशा छ, यो एकदिन अबस्य सफल हुनेछ। अब यो यासाशि जापानीज भाषा स्कूलको मात्र उद्देश्य नभयर सबै चितवनको शैक्षिक परामर्श ब्याबसायी साथी हरुको उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाई हो, र आशा छ यो एक दिन अबस्य पुरा हुनेछ। यदि त्यसो भयको खण्डमा चितवन बाट जापानिज भाषा पढेर बिद्यार्थी भिसामा जापान जान चाहने सबैले निशुल्क जापानिज भाषा पढन पाउने छन्, र कसैले पनि हुदै नभयको प्रचार सामाग्री राखेर झुटको खेति गरेर सोझासाजा बिद्यार्थी सग भाषा पढाउने बहानामा पैसा असुल्न पर्ने थियन र बिद्यार्थी लाई पनि अप्लाई गर्दा पर्ने आर्थिक भार कम हुने थियो।
प्रश्न : एउटा बिद्यार्थी लाई जापानिज भाषा पढ्न देखि जापान अप्लाई गर्दा सम्म कन्सल्टेन्सी लै कति बुझाउनु पर्छ ?
यासाशि जापानीज भाषा स्कूल जहिले पनि बिद्यार्थी र अभिभाबक प्रति उत्तरदाई रहने सस्था हो। sहामी जहिले पनि बिद्यार्थी ले कम भन्दा कम खर्चमा अप्लाई गर्न पाओस भनेर निशुल्क जापानिज भाषा फ्री डकुमेन्टेसन् जस्ता कुरा हरुमा सहयोग गर्दै आइरहेका छौ । यो सबै सहयोगले गर्दा खासै धेरै खर्च आउदैन। यासाशि जापानीज भाषा स्कूल ले बिद्यार्थी लाई जापान अप्लाई गराउदा जापान बाट सिओइ आउनु भन्दा अगाडी रु दश हजार मात्र लिन्छ यदि सिओइ नआयको खण्डमा खर्च हुने भनेको दश हजार मात्र हो अन्य कुनै खर्च लाग्दैन।
प्रश्न : जापान जानलाई कति खर्च लाग्छ ?
जापान जानको लागि लाग्ने खर्च तब सुरु हुन्छ जब बिद्यार्थी ले जापान इमिग्रेसन बाट सिओइ लेटर प्राप्त गर्छ। त्यस पश्चात पहिलो खर्च भनेको जापानको भाषा इस्कुल को फीस तिर्नु हो तो फीस ६६०,००० देखी ७५०,००० जुन जापानमा एक वर्ष पढ्न को लागि भनेर तिरिन्छ। र अर्को खर्च भनेको जापान मा बस्नको लागि इस्कुल को होस्टल प्रयोग गर्नेकि नगर्ने भन्ने आउछ । येदि तपाई इस्कुल को होस्टल प्रयोग नगरी अनेत्र बस्नुहुन्छ भने तपाइले कुनै पनि सुल्क जापान पठाउनु पर्ने हुदैन। पढ्न को लागि लाग्ने फीस पठाय मात्र पुग्छ। येदि तपाई इस्कुल को होस्टल प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने छ महिनाको इस्कुल को होस्टल प्रयोग गर्नको लागि ९०,००० देखि १८०,००० सम्म पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात लाग्ने खर्च भनेको जापान जानको लाग्ने प्लेन टिकट खर्च ४५,००० देखी ६५,००० सम्म र अन्तेमा शैक्षिक परामर्श सस्था ले बिद्यार्थी जापान भिषा लगायर जापान पठाउन सफल भय बापत १००,००० सम्म सेबा सुल्क लिने गरेका छन् ।
प्रश्न :अनि अहिले त बजारमा २ लाख मा जापान भनेर आइरहेको छ त ? तपाई हरुले पठाउदा धेरै अरुले पठाउदा थोरै हुने होर ?
जापान जानको लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा तपाइलाई मैले अगिनै बताईसके । जुन खर्च जो कोहिले पनि जापानको स्कुलको वेब साइड मा गयर हेर्न सक्छ। जुन रकम जापानिज येन मा लेखियको हुन्छ। र त्यो रकम बिश्व को कुनै पनि देश बाट अप्लाई गर्दा लाग्ने रकम नै तेही हो र बराबर लाग्छ भने नेपाल को एउटा कन्सल्टेन्सी बाट गर्दा कम लाग्ने अर्को बाट गर्दा बढी लाग्ने भन्ने हुदैन ।
अब कुरा आयो दुइ लाख मा जापान जान पाईन्छ? दुइ लाख बिद्यार्थी ले हालेर बाकी पैसा कन्सल्टेन्सी ले हालेर दुइ लाख मा बिद्यार्थी लाई जापान पठाइदिने हो? कि दुइलाख मा जापान जान पाईन्छ भनेर बिद्यार्थी लाई आश देखायर भाषा पढायको अप्लाई गरेको बापतको खर्च भनेर सोझासाजा बिद्यार्थी सग हजारौ लुट्ने हो ? जापान जान लाग्ने प्लेन टिकट खर्च ४५,००० देखी ६५,००० सम्म र शैक्षिक परामर्श सस्था ले बिद्यार्थी जापान भिषा लगायर जापान पठाउन सफल भय बापत १००,००० सम्म सेबा सुल्क लिन्छन भने यो कसरि सम्बब छ विद्यार्थी र अभिभाबक ले सोच्नु पर्ने देखीन्छ।
अन्तर्वार्ता बाट थप